Baiboly pejy 1 - Ny Baiboly
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Manaraka Farany
26Rehefa izany dia hoy Andriamanitra: Andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika, mifanahaka amintsika, ka aoka hanjakany avokoa ny hazandrano ao amin'ny ranomasina, ny voro-manidina eny amin'ny habakabaka, ny biby fiompy sy ny tany rehetra, ary ny biby mandady mikisaka amin'ny tany. 27Ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy; mitovy endrika amin'Andriamanitra no nahariany azy, ary nataony lahy sy vavy izy ireo. 28Dia nitso-drano azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe: miteraha maro, mitomboa, mamenoa ny tany, ka mizakà azy; ary anjakao ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina, ny voro-manidina mbamin'ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. 29Ary hoy Andriamanitra: Indro omeko anareo ny anana mamoa rehetra eo ambonin'ny tany, mbamin'ny hazo rehetra misy voankazo manana ny voany ao aminy; izany no atao fihinanareo. 30Fa ho an'ny bibin'ny tany mbamin'ny voro-manidina sy izay rehetra mihetsiketsika eto ambonin'ny tany, ka manam-pofon'aina ao aminy, dia ny zava-maitso rehetra no omeko ho fihinany. Dia tanteraka izany. 31Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ka tsara indrindra izany. Ary nisy hariva sy nisy maraina: izay no andro fahenina.
Jenezy toko 2
Ny Paradizy - Ny namoronana ny vehivavy.
1Toy izany no nahavitan'ny lanitra sy ny tany mbamin'izay rehetra nomba azy. 2Ary tamin'ny andro fahafito dia efa vitan'Andriamanitra ny asa nataony; ka tamin'ny andro fahafito izy nitsahatra tamin'ny asa rehetra nataony. 3Ary Andriamanitra nitso-drano ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany andro izany no nitsaharany tamin'ny zavatra rehetra nohariny tamin'ny nanaovany azy.
4Izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany, rehefa voahary izy, rehefa vitan'ny Tompo Andriamanitra ny tany sy ny lanitra.
7Vovo-tany no nanaovan'ny Tompo Andriamanitra ny olombelona, dia nofofoniny fofon'aina mahavelona ny vavorony, ka tonga zava-manana aina ny olona. 8Ary Iaveh Andriamanitra nanao saha tany Edena, tany atsinanana, ka napetrany tao ny olona izay noforoniny. 9Ary nampanirin'ny Tompo Andriamanitra tamin'ny tany izao hazo rehetra mahate-hijery sady fihinana isan-karazany izao sy ny hazon'aina tao afovoan'ny saha, ary ny hazon'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. 10Nisy ony anankiray nivoaka ao Edena, hanondraka ny saha, ka avy eo izy dia nisampana efatra. 11Fisòna no anaran'ny voalohany; io no mandeha manodidina ny tany Hevilaty rehetra, izay misy ny volamena. 12Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany. Any koa no misy ny bdelioma sy ny vato oniksa. 13Geona no anaran'ny ony faharoa; io no manodidina ny tany Kosy rehetra. 14Tigra no anaran'ny ony fahatelo; io no mandeha ao atsinanan'i Asora. Ary Eofrata no anaran'ny ony fahefatra.
15Dia nalain'ny Tompo Andriamanitra ralehilahy, ka napetrany tao amin'ny sahan'i Edena, mba hiasa sy hiandry azy. 16Ary Iaveh Andriamanitra nanome izao didy izao an-dralehilahy: Azonao ihinanana avokoa ny hazo rehetra eto amin'ny saha. 17Nefa aza ihinananao ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa ho faty mihitsy hianao amin'ny andro hihinananao. 18Ary hoy Iaveh Andriamanitra: Tsy tsara raha irery ny lehilahy; fa hanaovako mpanampy azy mitovy aminy izy. 19Ary Iaveh Andriamanitra, izay efa namorona tamin'ny tany ny biby rehetra eny an-tsaha sy ny vorona rehetra eny amin'ny habakabaka dia nampiavy azy hankeo amin-dralehilahy mba hahitany izay hanononany azy avy; hitondran'ny zava-manana aina rehetra ny anarana homen-dralehilahy azy avy.
Pejy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Manaraka Farany